VaMugabe Vovimbisa Kuwedzera Vashandi veHurumende Mari paZuva reMauto
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vanoti vari muchiuto vari kubatsira veruzhinji zvakasimba vachiti vanofanira kuwedzerwa mari dzemihoro.
Vachitaura pamhemberero dzekucherechedza vaonowona nezvekuchengetedzwa kwenyika reDefence Forces Day kunhandare yeNational Sports Stadium nemusi weChipiri, VaMugabe vakati masoja akashanda zvakasimba kubvisa zvimbambaira munzvimbo dzakawanda munyika mushure mekubatsirwa nehurumende yeNorway.
VaMugabe vatiwo vanhu vazhinji vakabatsirwa nemasoja pakaita mafashamu emvura munzvimbo dzakawanda munyika gore rino. Nekuda kwemabasa ari kuitwa nevari muchiuto aya, VaMugabe vati masoja anofanira kuwedzerwa mari dzemihoro.
Mashoko avo anouya apo vashandi vehurumende vazhinji vari kugunun’una nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa.
Asi umwe wevanorwira kodzero dzeveruzhinji munyika, Muzvare Linda Masarira vashora danho rekuda kuwedzera masoja mari iri vachiti uku kuedza kwaVaMugabe kuti vatsvetere vari muchiuto kuti vazovashandisa pakautsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya.
Hatina kukwanisa kutaura nevemapato anopikisa kuti tinzwewo pfungwa dzawo panyaya iyi.
Zvichakadaro, VaMugabe, avo varumbidza mauto nebasa raari kuita, vati vari muchiuto vave nemukanawekuwedzera fundo yavo inoenderana nezvechimanjemanje mukuchengetedzwa kwenyika zvichitevera kuvhurwa kwakaitwa Defense College.
Mune chimwe chiitiko chakatyamadza vanhu, mumwe musoja adonhera muchita chevanhu vanga vari munhandare iyi neparachuti paanga achiita zviratidzwa zvanga zvakanangana nezuva remauto. Hapana hapo akuvara pachiitiko ichi.